Izindaba - Izinzuzo nokusetshenziswa kwemikhiqizo yensimbi ye-powder
Izinzuzo nokusetshenziswa kwemikhiqizo ye-powder yokusansimbi
I-powder metallurgy inqubo yokwenza insimbi noma i-powder yensimbi (noma ingxube yempuphu yensimbi kanye nensimbi engeyona eyensimbi) njengempahla eluhlaza, ngokwenza nokwakha, ukwenza izinto zensimbi, ukuhlanganiswa nezinhlobo ezahlukahlukene zemikhiqizo.
Izinzuzo ze-powder metallurgy:
1. Ubuchwepheshe be-metallurgy technology bunganciphisa ukuhlukaniswa kwezingxenye ze-alloy futhi buqede isakhiwo esishubile, esingalingani sokulingisa.
2. Ingabona kalula izinhlobo eziningi zezinhlanganisela futhi inikeze ukudlala okugcwele kuzici ezifanele zento ngayinye yento. It is a inqubo ebiza ngenqubo yobuchwepheshe yokukhiqiza isisekelo esisebenza ngensimbi ephezulu kanye nezinhlanganisela zobumba.
3. Ukukhiqizwa kwenqwaba okuseduze nokwenziwa okuzenzakalelayo kungafezeka, ngaleyo ndlela kuncishiswe ngempumelelo ukusetshenziswa kwezinsizakusebenza namandla ekukhiqizeni.
4. Ingasebenzisa ngokugcwele insimbi, umsila, udaka wensimbi, izikali zensimbi ezigingqikayo kanye nokusebenzisa kabusha izinsimbi ezilahliwe njengezinto zokusetshenziswa. It is a ubuchwepheshe obusha obungakwazi ukufeza ngempumelelo ukuvuselelwa kwempahla nokusetshenziswa okuphelele.
5. Ingakhiqiza okokusebenza kanye nemikhiqizo enesakhiwo esikhethekile nezakhiwo ezingakwazi ukukhiqizwa ngendlela ejwayelekile yokuncibilika.
Imikhiqizo yensimbi ye-Powder isetshenziswa kabanzi, kusuka ekukhiqizeni imishini ejwayelekile kuya kuzinsimbi zokunemba; Kusuka kumathuluzi wehadiwe kuya emishini emikhulu eyenziwe ngo-carbide mechanical ukwakha imishini; Kusuka embonini ye-elekthronikhi kuya ekukhiqizeni izimoto; Kusuka embonini yomphakathi kuya embonini yezempi; Kusuka kubuchwepheshe obujwayelekile kuya kubuchwepheshe obuphambili, i-powder metallurgy inqubo ingabonakala.
Lokhu okungenhla kumayelana nezici ezihlobene nokusetshenziswa kwemikhiqizo ye-powder metallurgy, ngiyethemba lolu lwazi lungakusiza ukuthi uqonde imikhiqizo ye-powder metallurgy.